We Fight We Win. -- " More than Media ": မြစ်ဆုံရေကာတာထဲ ခရစ်ယာန် လက်ဝါးကပ်တိုင် ဆုတောင်းခြင်းကို ရဲများ မေးမြန်း
ယင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်များကို ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း တာဝန်ယူတည်ဆောက်နေသည့် မြန်မာပြည်မှ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်အစိုးရပိုင် စီပီအိုင် (China Power Investment Corporation, CPI) တို့က အသင်းတော် နှစ်ပါးမှ ခေါင်းဆောင်များအား ၂၀၁၁ ယမန်နှစ်မှ ဖိအားပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
တန်ဖရဲရွာမှာ မြင်ရတဲ့ မကျူးကျော်ရ ပိုစတာ။
မြစ်ဆုံ တန်ဖရဲရွာမှ ကချင် ရိုမန်ကက်သလစ် (RC) ဘုရားကျောင်း။
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ တန်ဖရဲရွာ။
ka lar ka burma taw ko saw kar nay tae.
see here -- http://drkokogyi.wordpress.com/2012/04/16/open-letter-to-our-myanmar-friends-to-help-stopping-racial-riots/
TQ. Because of the previous commenter linking to my blog, and came and INSULT me,
I hereby could confirm that Christians and Muslims are cousin brothers.